Steam - Linux Vakapindwa muropa | Linux Vakapindwa muropa (Peji 2)
Kisimusi Mutambo paLinux: Ipa yakanakisa mitambo yemavhidhiyo
Kisimusi iri kuuya, kana iwe uchiri kusaziva chekupa (kana chekupa iwe pachako), funga nezve aya evhidhiyo mutambo mazita eLinux.
Iyo Yakareba Rima: nyowani maficha mune yekupona modhi
Iyo Yakareba Rima nderimwe remamwe anonakidza mazita anowanikwa kuLinux. Uyu mutambo wevhidhiyo ikozvino wawedzera mararamiro ekupona
Kupona Mars: DLC Itsva Yakaburitswa neParadox
Paradox inogara ichivandudza kuvandudza uye zvitsva zvinodhawunirwa zvezita reKupona Mars. Mutambo wevhidhiyo we...
Euro Truck Simulator 2: Yakakura yekuvandudza iri kuuya
Kana iwe uri fan weiyo Euro Truck Simulator zita, ikozvino iwe unofanirwa kuziva kuti huru yekuvandudza iri kuuyawo kuLinux
AssaultCube 1.3: Nyowani vhezheni yemahara FPS yeLinux
AssaultCube 1.3 ndiyo vhezheni nyowani yeuyu munhu wekutanga kupfura inowanikwa kuLinux zvachose mahara.
Mazuva manomwe eKufa: Yakaburitsa yayo yechimakumi maviri Alpha vhezheni
Iyo Alpha 20 vhezheni yevhidhiyo mutambo wezita 7 Mazuva eKufa ichangoburitswa. Ichiri muchikamu chekuedza, asi ichifambira mberi zvishoma nezvishoma
WorldBox - Mwari Simulator yakaburitswa muEarly Access paValve's Steam, saka yatove kufambira mberi kukuru kusvika pakuburitswa kwekupedzisira.
Iyo yakakurumbira anti-cheat system yemitambo yevazhinji, Battleye, inokwezva mimwe mitambo kuProton yeLinux
Ubisoft Rainbow Six Siege rutsigiro neProton?
Ubisoft yakagadzira rimwe remazita ayo akabudirira kwazvo, akadai saRainow Six Siege, uye zvino inogona kuuya kuProton?
Hafu-Hupenyu: Citadel chii ichi chirongwa cheValve?
Valve hairegi kugadzira zvitsva zvepasirese yemitambo, uye iko zvino vari kushanda pachirongwa chinonakidza chinonzi Half-Life: Citadel.
Mapako & Cliffs Chikamu I chiri pano, iko zvino yave nguva yeCaves & Cliffs Chikamu II. Ndiko kuti,…
Kana iwe uchida post-apocalyptic themed vhidhiyo mitambo, saka iwe uri kuzoda iyi nyowani nyowani inonzi DYSMANTLE.
Iyo Steam Deck console iri kukwezva vamwe vanogadzira, vakaita seBohemia Interactive, vagadziri veZuvaZ
Kana iwe uchida zano revhidhiyo mitambo yakavakirwa munhoroondo, Europa Universalis IV ndiyo yauri kutsvaga, ikozvino ine yemahara update.
Kana iwe uchida matambudziko emakamuri ekupukunyuka, uye iwe usina chero padyo, unogona kuedza Escape Simulator vhidhiyo mutambo ...
Kana iwe uchiyeverwa neForza Horizon 5 yemota vhidhiyo yemutambo, ikozvino unogona kuiedza pane yako GNU / Linux distro.
Valve inokurudzira Manjaro kushanda pakuvandudza kweSteam Deck uye yayo SteamOS 3
Valve yakapa rumwe ruzivo nezveSteam Deck, uye ichangobva kukurudzira iyo Manjaro inoshanda sisitimu kuti ishande pakukura kwayo.
Kana iwe uchida kuziva zviri mukati meValve Steam Deck koni, apa unogona kuzvigutsa
Chokwadi iwe uchazonzwa zvakawanda nezve WiFi Dual Station, chimwe chinhu chakabatanidzwa ne AMD, Qualcomm uye Valve
Kana iwe waifarira mutambo wevhidhiyo Nyika Yakasarudzika 3, ikozvino kunouya Kereke yeChipupuriro Chitsvene, kuwedzera kune zvakawanda zvitsva maficha
Iyo inozivikanwa vhidhiyo yemutambo mhando shooter Wolfenstein: Enemy Territory ikozvino inowana imwe nhanho nezvimwe zvimwe zvitsva mune zvirimo
Valheim ndeimwe yemavhidhiyo emitambo anonakidza anowanikwa kuLinux, uye ikozvino inouya nenhau
Iyo yakakurumbira rori yekutyaira simulator, Euro Rori Simulator 2, ikozvino ine nyowani yevatambi vakawanda kuwedzera
Iyo Steam Deck yakanyanya kudarika koni, uye pano tinotsanangura zvinhu gumi zvaunofanirwa kuziva nezve inotevera Valve chishandiso.
Voodoo Kid mutambo wevhidhiyo wekare kubva muna1997 uyo vamwe vacharangarira nekushuva. Iye zvino dzokera kuLinux zvakare
Kupona Mars Pazasi nepashure kwakatoburitswa, chinyorwa chitsva cheiyi Martian kupona uye zita rekoloni
Kana iwe uchida wega-mutambi wekutanga-munhu shooter mitambo yemavhidhiyo, ikozvino Cathedral 3-D iri kuuya kuLinux.
Kana iwe waifarira mazita senge Kudonha uye Wasteland, ikozvino kunouya ATOM RPG Trudograd, kuwedzera kunozopa zvakawanda kutaura nezvazvo
Yakakurumbira retro yemitambo distro, RetroArch, yaisa iyo Steam mutengi kuburitswa iyo ichavandudza kugarisana
Steam Deck dev-kits iri kufamba maererano neValve
Steam Deck yekuvandudza maturusi ari "pakufamba" sekusimbiswa kweValve
Kana iwe uchida wekutanga munhu adventure mitambo, pamwe nekudzvanya mitambo, iwe unofanirwa kuziva Yekutanga Warp
Kana iwe uchida vapfura, kana kupfura mitambo yemavhidhiyo, Killer Bean inounza iwe wechitatu-munhu chiito neakanyanya madhidhi ekuseka
Kana iwe uchida chivakwa cheguta uye manejimendi mitambo yemavhidhiyo, Guta Game Studio ikozvino inouya nezvinhu zvitsva mune yayo yekuvandudza
\_ SPEK.TAKL \_ Yakarambidzwa Edition yasvika, zita idzva revateveri vepfungwa dzinotyisa mitambo yemavhidhiyo
Kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo ine hwaro, iwe zvechokwadi waida Spore, uye iwe zvechokwadi unoda Kubudirira
Kana iwe uine matambudziko nemaVR magirazi ako paLinux, heino mhinduro inogoneka yekuipedza
Kana iwe uchida graphic adventure mitambo yemavhidhiyo uye kugona, iwe unofanirwa kuziva MakerKing, zita rinonakidza
Izvo hazvinzwika senge zvakawanda, asi Linux gamers vakatosvika 1%. Icho chikonzero, iyo Steam Deck inofambiswa neArch Linux.
Kana iwe uchida sainzi yekunyepedzera, spacehip uye nzvimbo mitambo yemavhidhiyo, ipapo iwe uchada X3: Farnham's Nhaka
Kana iwe uri mune yekufambisa mitambo yemavhidhiyo, iwe uchafadzwa kuziva kuti Yekutakura Fever 2 iri kuwana hombe yezhizha kugadzirisa ...
Steam Deck iri inotakurika koni kubva kuValve iyo ichakwanisa kufambisa PC mitambo, uye kunyange kuibatanidza kune yekunze yekutarisa.
Iyo VKD3D-Proton 2.4 vhezheni yakatoburitswa pamwe nekumwe kugadziridzwa kwekuita, pakati pezvimwe zvitsva zvemitambo
Kana iwe uchida sainzi yekunyepedzera, mitambo yemavhidhiyo uye dingindira renzvimbo yekoloni, ipapo uchafarira Astro Colony
Iyo inozivikanwa vhidhiyo yemutambo zita reWorld Warhammer II: Runyararo uye Hasha dzichasunungurwa munguva pfupi seDLC ...
Valheim haisi chete yemutambo wemavhidhiyo zita rinowanikwa natively yeLinux, yakave zvakare yakagadzirwa kubva kuLinux
Valve yakabatanidza Proton mune yayo Steam mutengi weLinux, iri kunakidza vatambi. Asi ... unoziva Proton GE?
Punk Wars chirongwa chitsva chevhidhiyo yemutambo iyo yakatangawo muGNU / Linux nyika uye ine zvinonakidza ruzivo
Valve iri kushanda purojekiti nyowani isingazivikanwe zvakanyanya, asi inoita kunge inotakurika Steam koni ine Linux
Inofa Kombat 11 ndeimwe yemazita ekurumbidza uye wacky ekurwa munguva pfupi yadarika. Asi ... inogona kuridzwa paLinux?
Valve's vhidhiyo mutambo wevatengi, Steam Play, inovandudzwa pamwe nekumwe kuvandudzwa uye nyowani vhezheni yeProton, 6.3-3
Kana iwe uchida mutambo wevhidhiyo, kana kana iwe wanga uchifunga nezve kuiisa, Beyond a Steel Sky, iwe unofanirwa kuziva kuti yakagadziridzwa nekuvandudza kukuru
Feral Inopindirana inodzoka kumutoro nechiteshi chemutambo wevhidhiyo Yakazara Hondo: Roma Yakagadziriswa yeiyo GNU / Linux distros
Iyo Wild Case ndeye yemusango 2D yekutanga-munhu nhanho iwe yaunogona ikozvino kuve neyako pane yako GNU / Linux kugovera
Colony Ship iri nyowani yemavhidhiyo mutambo wezita wakanangana nekutumira-Pasi kukoloni kuuya kuGNU / Linux
Kana iwe uchida kutamba yako yaunofarira PC vhidhiyo mitambo zvachose kure kure kubva chero kwaunoda, izvo zvauri kutsvaga ndeyeMwedzi
Vhidhiyo yeValve yemutambo Portal 2 inogamuchira nyowani nyowani nekuvandudza kukuru kune iyo DXVK dudziro dura reVulkan
Kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo inosanganisa tekinoroji uye mashiripiti madingindira, saka Vhura Sorcery Gungwa ++ ndizvo zvauri kutsvaga.
Dai iwe wanga wakamirira makamuri ekupunyuka simulation mutambo wevhidhiyo Escape Simulator, iyo Alpha yeLinux yatosvika
Rimwe remazita anotarisirwa kwazvo munyika yeLinux, uye kumwe kwekutanga kukuru kwe2021: ENCODYA inosvika
Pirates yeFrontier Reach: mutambo wevhidhiyo "uchadzika" paLinux
Pirates yeFrontier's Reach inonakidza kurwisa yemuchadenga Arcade vhidhiyo mutambo uyo unomhara paLinux, pun yakatarwa ...
Zviroto Engines: Nomad Maguta iri idzva vhidhiyo mutambo zita, kunyanya imwe yechiito RPG genre ichauya kuLinux
Valve haina kuita basa, uye zvinoita sekunge ine zvishoma zvekupa. Sezvavanoratidzira, ine akati wandei mitambo yemavhidhiyo mukusimudzira
Iyi ndiyo nyowani uye inonakidza yezvinyorwa zvemukati zveVolcanoids, iyo steampunk uye yekupona vhidhiyo mutambo zita
Valheim izita rauchazoda kurangarira, sezvo rakamirirwa kwenguva refu uye richazoburitswa muna Kukadzi 2
Mutambo mutsva wevhidhiyo wevasingaenderane. Ndiro zita rekuti Muchengeti weHove, wakatsaurirwa kune vanoda aquarium ...
Tropico 6: Carribean Skies, iro zita idzva remitambo iyi yemitambo yevhidhiyo rakabudirira zvekuti rinouya rakatakura zvinhu zvitsva zveLinux.
Uri kushuvira here kuti utambe Cyberpunk 2077 pane yako Linux distro? Zvakanaka rega kuzviita, Valve ichaita kuti zvikwanisike neProton 5.13-4
Valve's Steam vhidhiyo mutambo wevatengi wagadziriswa. Iyo itsva vhezheni inosanganisira rutsigiro rwevatsva vatongi veiyo Sony PS5
Idzi ndidzo nhau idzo nyowani chigamba vhezheni 0.8 yemutambo wevhidhiyo Last Epoch inounza, iyo inowanikwawo kune Linux
Zvinotaridza kuti mutambo wevhidhiyo Wasteland 3 inogona kuwanikwa yeGNU / Linux distros kupera kwa2020
Mask YeRose inoyevedza inoonekwa yerudo inoverengeka, mutambo wevhidhiyo naFailbetter Mitambo iyo inokushamisa iwe
Iyo inozivikanwa Yekufamba Kwakafa nhevedzano yakaburitsa akawanda mavhidhiyo emitambo mazita, anosanganisira Bridge Muvaki: Iwo Anofamba Vakafa.
Iye zvino unogona kuponesa nyika kubva kune inouraya hutachiona denda nemavhidhiyo mutambo Plague Inc.: Mushonga weLinux
Iyo yepasirese yevhidhiyo mutambo wechiitiko wakarongedzwa naValve, iyo Steam Game Mutambo, yatove nezuva rekupemberera kwayo
Valve's Steam mutengi yakatangwa muna2012, ikozvino yava nemakore masere kubvira pakaburitswa Beta yeLinux.
Kana iwe uchida kusvetuka uye kutenderera mitambo yemavhidhiyo pamakomo emabhasikoro, saka iwe unofanirwa kuziva Descenders yeLinux
Pasi pezita iri risingazivikanwe, Pressure Vessel, inovanza chirongwa chinonakidza cheValve icho chave kuwanikwa paGitLab
Kana iwe uchida mitambo yeFPS yemavhidhiyo, kana wekutanga munhu shooter mitambo, ipapo iwe unofarira Inotyisa Warp yeLinux
Kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo, saka unofanirwa kuziva kuti Projekt Z yakazivisa kuti ichave nerutsigiro rweGNU / Linux
Paniz Zombie! Kwayedza inowana ongororo huru neLinux rutsigiro, uye ichauya nekukurumidza kuti iwe unakirwe nemutambo uyu
DevLife: mutambo wevhidhiyo umo iwe uchanyudza mune iyo IT indasitiri
DevLife mutambo wevhidhiyo maunopinda muindasitiri yeIT, uri mumwe mushandi weiyo tekinoroji chikamu
Munguva yechando rutsigiro rwevideoogame Commandos 2 HD Remaster inosvika kune iyo GNU / Linux mapuratifomu. A classic inodzoka !!!
Kana iwe uchida mutambo wevhidhiyo Makonye uye wakatorwa nehonye sehondo, saka idzi dzimwe nzira dzeLinux dzichakufadza.
MunaAugust imwe yemitambo yemavhidhiyo yakamirirwa kwenguva refu ichauya neiyo itsva Steam Game Mutambo we2020. Mufaro wevatambi
Iyo yenhoroondo nzira vhidhiyo mutambo Imperator: Roma yakagamuchira hombe yemukati yekugadzirisa uye yakasununguka zvachose
DRAG izita remumwe weanotarisirwa mitambo yemavhidhiyo yeLinux uye yanga ichiita "ruzha" pamasocial network kwenguva yakareba.
Poly Bridge 2: Nyowani Yemahara Yemukati Inowanikwa
Kana iwe uchida kuvaka, iwe uchave uchinyanya kuda kuvaka mabhiriji muPoly Bridge 2. vhidhiyo mutambo.Zvino nezvimwe zvirimo
Kana iwe uchida kutyisa kwepfungwa uye kushanya, saka iri vhidhiyo yemutambo zita reLinux ichakufadza: Saint Kotar
Tannenberg, mutsva wevhidhiyo mutambo weLinux yakavakirwa paHondo Yenyika I uye yeiyo FPS mhando iyo inowanzo farira zvakanyanya kune vanoda mafuri.
Iwo mutambo wevhidhiyo Werewolf Iyo Apocalypse - Mwoyo wesango unouya kuLinux, saka vashandisi veiyi sisitimu vanozokwanisa kuishandisa zvakanyanya
Kana iwe uchida kuvaka mitambo yemavhidhiyo, saka unogona kuedza Prison Architect kuti uvake nekutarisira jeri rako. Iye zvino nekuderedzwa uye nezvimwe
Iyo yakakurumbira yekumadokero vhidhiyo mutambo Desperados III yasimbisa kuti ichauyawo kuzomhanya natively paGNU / Linux distros
ATOM mutambo mutsva wevhidhiyo uri weLinux uye unotaridzika kunge unonakidza. Ichakuyeuchidza nezve mimwe mitambo yengano yekare
Kana iwe uchida manzwiro akasimba uye nyaya dzinotyisa, Asylum iri vhidhiyo yemutambo zita reLinux raunoda
Iyo nyowani vhezheni yeProton 5.0-8 iri pano uye idzi ndidzo shanduko dzayo
Vagadziri veValve vachangobva kuzivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yechirongwa "Proton 5.0-8" ...
Autonomous kutyaira haizi nyaya yemota chaidzo, inosvikawo pasirese yemitambo yemavhidhiyo, uye iyo ...
EA yakavhura kodhi yekodhi yezano rayo rekare Command & Kukunda, saka nharaunda inogona kugadzira akasiyana uye maMOD
Kana iwe uchida yekutanga-munhu kushanya, uye iwe usiri kuda kushandisa mari pamitambo yemavhidhiyo, zita rako rakarongedzwa: Mutemo II weLinux
Iyo xrdesktop chirongwa, mukubatana neValve, inoramba ichishanda mukuvandudza kusimudzira chaiyo chaiyo pane iyo Linux desktop
Driftmoon ine kuwedzera kutsva, iine Enchanted Edition. Iyo nyowani RPG adventure mutambo wauchada kune yako Linux distro
Kana iwe uchida mitambo yemitambo nemavhidhiyo eiyo inotyisa mhando, ipapo Ganda Witch inogona kunge iri zita rakanaka rekutarisa yeLinux.
Receiver 2 ichokwadi chaizvo chimbo chekufananidza mutambo wevhidhiyo wakaburitswa muna Kubvumbi uye neLinux inonakidza kwazvo
Kune akawanda uye akawandisa emitambo yemavhidhiyo yeiyo GNU / Linux chikuva, uye epamusoro mhando vhidhiyo mitambo iri kuvandudzwa. Asi…
Escaper: Chekutanga-Munhu Escape Kamuri Vhidhiyo Game Kuuya kuLinux
Escaper ndiyo yekutanga yevhidhiyo mutambo weLinux weiye wekutanga-munhu kutiza imba yemhando, zita rinonakidza kune vanoda mitambo iyi.
Uyu hausi mutambo wevhidhiyo wakajairika, ichi chinyorwa chemberi chekuparadza chemuviri chauri kuzoda, teardown iwe uchaida paLinux izvozvi.
Ndiri kuzogovana zvishoma zvechiitiko changu uye kuravira kwakashata mumuromo mangu iro basa rekuyedza kuita iri zita re ...
Valve yakafunga kuisa iyo yese Hafu-Hupenyu saga paSteam mahara kupemberera kuburitswa kwayo kunotevera, asi kusimudzira uku kune kudhindwa kudiki.
Kana iwe uri kufunga zvekumhanyisa Windows vhidhiyo mitambo pane yako yaunofarira distro, izvi ndizvo zvese sarudzo uye dzimwe nzira dzauinadzo
Kuzviuraya kwaRachel Foster iri vhidhiyo yemutambo zita ine yakanyanya inonakidza nyaya kumashure kwayo. Chakavanzika uye zano kusvikira kumagumo
Iyo Steam mutengi, iyo inozivikanwa Steam Play, iri muhombe neshanduro nyowani yakabuda yeLinux, ine Proton 4.11-12
Iwe unogona ikozvino kurodha pasi uye nekuisa iyo Life is Strange 2 vhidhiyo mutambo kuti unakirwe nemusoro pane yako yaunofarira GNU / Linux kugovera.
Project RIP inonakidza kwazvo nyowani shooter mutambo wevhidhiyo iyo yakaburitswa nguva pfupi yadarika yeGNU / Linux. Inowanikwa pane Steam
Northgard ine yemahara yekuwedzera inonzi Kukunda, zano revhidhiyo mutambo unowanikwawo kune GNU / Linux
Nobodies iri rinonakidza vhidhiyo mutambo zita unosvika anoverengeka mapuratifomu, kusanganisira yako GNU / Linux distro
Iyo tavern simulator mune yekufungidzira nyika yeLinux, aya ndiwo marongero eCrossroads Inn chirongwa chatakataura nezvacho munguva yapfuura chinoratidzwa
Kuburitswa kutsva kweValve's Steam Play mutengi weLinux inosvika, ine Proton 4.11-7 uye zvimwe zvinonakidza zviripo zviripo
SCS Software inobatana nechakanaka chikonzero, ichaita chiitiko chepasi rose chekuzivisa uye kupa kwemari kurwisa kenza yemazamu
DOSBox (Boxtron) inogona kushandiswa sechinhu chisiri chepamutemo mukati meValve's Steam mutengi. Saka unogona kutamba mitambo yako yeMS-DOS
ATOM RPG mutambo unonakidza wevhidhiyo weLinux uyo uchangobva kugashira hukuru hwekuvandudza kugadzirisa zvirimo
Ubuntu 20.04 ichave iine mashoma 32-bit mapakeji anowanikwa, iwe unoda here kuziva zvavari uye kuti ivo vachakukanganisa sei iwe? Tinokutsanangurira iwe
Steam Play inoenderera mberi nekuvandudza kwayo. Valve's GNU / Linux mutengi inovandudza uye ikozvino inosanganisira vhezheni itsva yeProton 4.11-5 (naValve & CodeWeavers)
Hotel Magnate mutsva simulation uye manejimendi mutambo wevhidhiyo yehotera yako iyo ichauya kuLinux mushure mekubudirira kwevanhu vakawanda mushandirapamwe.
SteamVR 1.7, vhezheni nyowani yeValve's projekiti ine hukuru hwekuvandudza kweichoicho chokwadi mune yako yaunofarira mashandiro sisitimu
Mutambo uyu wakanangana ne surrealism uye zviroto, inovavarira kuratidza kushungurudzika kwevechidiki, mairi kunoongorora kusagadzikana kweiye uye neanotyisa maitiro ehukama hwevechidiki.